Yakakosha kuchengetedzeka yekuvandudza macOS Mojave neCatalina | Ndinobva mac
Pamwe chete na kusunungurwa kweMacOS 11.5, kuchengetedzwa kwekuchengetedza kwasvika kune ese macOS Catalina neMojave. Izvo zvakagadziriswa zvinogadziriswa ndezve bugs izvo zvinogona kutungamira kune zvakashata zvinoshandiswa kuwana midzi kupinda, kodhi yekumisidzana inomhanya nekernel ropafadzo, uye nezvimwe. Kune zvinopfuura makumi maviri zvekuchengetedza zvigadziriso zveMacOS Catalina neMojave. Kune vazhinji vashandisi, njodzi dzeidzi nyaya dzekuchengetedza dzinogona kunge dziri shoma, asi dzimwe dzinogona kunge dzakakomba, izvi zvakakosha kugadzirisa zvekuisa.
Apple ichiri kuziva nezve akasiyana mavhezheni ari pamusika we macOS mumusika. Ichi ndicho chikonzero ichangobva kuburitsa ekuchengetedza ekuvandudza kune iyo Mojave neCatalina anoshanda masystem. Zvinopfuura makumi maviri zvekuchengetedza zvigadziriso Kunyangwe zvichitaridzika kuti hazvigone kutikanganisa sevashandisi vepakati, isu tinofanirwa kuziva kuti ivo vakakosha kuti vagare vachitichengetedza kubva kune chero hunhu.
Tinofanira kungoenda Sarudzo Dzesarudzo> Software Gadziriso> Nezve Mac iyi> Gadziridza software uye uone kana zvinyorwa zvagadzirira. Ngatione kuti ndezvipi zvinogadziriswa, pakati pezvimwe zvakawanda zvakagoverwa macOS Catalina:
Chikumbiro chinogona kuita kodhi yekumanikidza ne kernel ropafadzo. Izvo zvave zvakagadziriswa kugadzirisa iyo yekuisimbisa yekusimbisa.
Kuvhura faira rakaumbwa zvine hungwaru kunogona kukonzera iyo zvisingatarisirwi kumiswa kwekushandisa kana kuitiswa kwekodhi yemutemo. Yakagadziriswa, ichibvisa kodhi iri nyore.
Anorwisa wemuno anogona kukonzeresa kutarisirwa kwekumbomiswa kana kuitiswa kodhi. Yakagadziriswa nekuda kwekuti ivo vane macheki akagadziridzwa.
Chikumbiro chakashata chinogona kuwana ropafadzo kubva kuna root paBluetooth. Izvo zvakagadziriswa kuvandudza hutongi hwehurumende.
Chishandiso chakaipa chinogona kuwana mikana yekuwana mudzi muCoreStorage. Iyo yakagadziriswa, ichivandudza iko kusimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Yakakosha kuchengetedzeka yekuvandudza macOS Mojave neCatalina
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 128